Ha chọpụtara ngwangwa nke na-enye ohere nsuso onye ọrụ, ọbụlagodi ma ị jiri Tor | Site na Linux
Febọchị ole na ole gara aga MkpisiakaJS mere a post blog nke na-agwa anyị gbasara ngwangwa nke achọpụtara maka ha na ihe ọ bụ na-enye ohere weebụsaịtị iji chọpụta ndị ọrụ dị iche iche na ihe nchọgharị, nke naanị desktọọpụ nchọgharị emetụta.
Ọ kwuru na ngwangwa na-eji ozi gbasara ngwa arụnyere na kọmputa iji ekenye ihe nchọpụta pụrụ iche na-adịgide adịgide nke, ọbụlagodi na onye ọrụ gbanwere ihe nchọgharị, na-eji ọnọdụ incognito ma ọ bụ VPN, ọ ga-adị mgbe niile.
Ebe ọ bụ na nsogbu a na-enye ohere nsuso ndị ọzọ na ihe nchọgharị dị iche iche, ọ bụ mmebi iwu nzuzo na agbanyeghị Tor bụ ihe nchọgharị na-enye ihe nchekwa nzuzo, ọ na-emetụtakwa ya.
Dabere na FingerprintJS, Nsogbu a adịwo ihe karịrị afọ 5 na amaghị ama mmetụta ya n'ezie. Na schema iju mmiri vulnerability na-enye ohere a hacker iji chọpụta ngwa arụnyere na iche na kọmputa. Ná nkezi, usoro njirimara na-ewe obere sekọnd na na-arụ ọrụ na Windows, Mac na Linux arụ ọrụ usoro.
Na nyocha anyị banyere usoro aghụghọ, anyị achọpụtala ngwangwa nke na-enye ohere webụsaịtị iji mata ndị ọrụ na ihe nchọgharị desktọpụ dị iche iche ma jikọta njirimara ha. Versionsdị nsụgharị desktọpụ nke Tor Browser, Safari, Chrome, na Firefox na-emetụta.
Anyị ga-ezo aka na nsogbu a dị ka atụmatụ Iju Mmiri, ebe ọ na-eji atụmatụ URL omenala dị ka agha ọgụ. Ihe dị nro na-eji ozi gbasara ngwa arụnyere na kọmputa gị iji kenye gị ihe nchọpụta pụrụ iche na-adịgide adịgide, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị gbanwee ihe nchọgharị, jiri ọnọdụ incognito, ma ọ bụ jiri VPN.
Iji lelee ma etinyere ngwa, ihe nchọgharị nwere ike iji njikwa schema wuru url omenala.
Ihe omuma atu nke a, enwere ike ichoputa, ebe obu na o zuru oke ime ihe ndia site na itinye skype: // na adreesị mmanya nke ihe nchọgharị ahụ. Site na nke a anyị nwere ike ịghọta ezigbo nsogbu nsogbu a nwere ike inwe. A makwara atụmatụ a dị ka njikọ miri emi ma jikwa ya na ngwaọrụ mkpanaka, ma ọ dịkwa na ihe nchọgharị desktọọpụ.
Dabere na ngwa arụnyere na ngwaọrụ, ọ ga-ekwe omume maka weebụsaịtị iji mata ndị mmadụ maka ebumnuche ọjọọ ndị ọzọ. Iji maa atụ, saịtị nwere ike ịchọpụta onye ọrụ agha ma ọ bụ ndị agha na ịntanetị dabere na ngwa arụnyere na njikọta akụkọ ihe mere eme nchọgharị kwenyere na ọ gaghị amata. Ka anyị gafee ọdịiche dị n’etiti ihe nchọgharị.
Nke isi ihe nchọgharị anọ metụtara, naanị ndị mmepe chrome yiri ka ha maara nke schema idei mmiri ngwangwa. Enweela nsogbu a na Chromium bug tracker ma kwesiri idozi ya n'oge adịghị anya.
Ọzọkwa, naanị chrome nchọgharị nwere ụdị ụfọdụ nke schema iju mmiri nchedo, dị ka ọ na-egbochi ngwa ọ bụla ịmalite ma ọ gwụla ma onye ọrụ rịọrọ ya dị ka pịa. Enwere ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ nke na-enye ohere (ma ọ bụ na-agọnahụ) weebụsaịtị iji mepee ngwa, nke atọrọ ka ọ bụrụ ụgha mgbe ịmechara atụmatụ URL omenala.
N'aka nke ọzọ na Firefox mgbe ị na-achọ ịnyagharịa na atụmatụ url amaghị, Firefox egosiputa ihe esịtidem na peeji nke na njehie. Peeji nke dị n'ime ya nwere mmalite dị iche na weebụsaịtị ọ bụla, yabụ na ọ gaghị ekwe omume ịnweta ya n'ihi njedebe nke amụma sitere na ya.
Banyere Tor, nsogbu ahụ na ihe nchọgharị a, bụ onye na-ewe ogologo oge iji rụọ ọrụ nke ọma dịka ọ nwere ike were 10 sekọnd maka ngwa ọ bụla iji nyochaa n'ihi iwu nchọgharị Tor. Agbanyeghị, nrigbu ahụ nwere ike ịgba ọsọ na ndabere wee soro ya lekwasịrị anya n'oge nnọkọ nchọgharị dị ogologo.
Kpọmkwem iji na-erigbu ndị schema idei mmiri vulnerability nwere ike ịdị iche site na ihe nchọgharị, ma na njedebe bụ otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ha chọpụtara ngwangwa nke na-enye ohere nsuso onye ọrụ, ọbụlagodi ma ị jiri Tor
Onye na NET dijo
O doro anya na m na-eji Linux, na Firefox ọ gosipụtara NJ, yana Vivaldi, mana; na OPERA ọ naghị arụ ọrụ.
Ọ metụtara, na amaghị m ma ọ nwere ụzọ ọ bụla iji zere ya ma ọ bụ mebie ya.
Zaghachi Onye na NET
Ọ ga-adị mkpa ịhụ, n'ọtụtụ ọnọdụ ... kedu maka nkesa kernel ochie, ihe nchọgharị na-enweghị mmelite na igwe arụmọrụ!
Zaghachi César de los RABOS
Oge oyi CMS: Sistemụ Ọdịnaya Ọhụrụ na-emeghe ma na-akwụghị ụgwọ